Iyo Ramangwana reKushamwaridzana Kwevashandisi: Beyond Touchscreens | Martech Zone
Iyi infographic kubva Shop Smart inokurukura ramangwana revashandisi ekunze kupfuura iro rekubata. Zvichida inonyanya kushandiswa mushandisi yandinoshandisa nhasi yangu Apple Watch. Iko kusanganiswa kweakawanda-kubata, kumanikidza, mabhatani, uye dials kwakaomarara. Uye nezvigunwe zvangu zvikuru, hazviwanzo chiitiko chisina musono. Ndiri kufara nezveramangwana!
Iyo Yemberi Yekushandisa Kushamwaridzana uye Nzvimbo
Shop Smart itemizes mamwe matekinoroji ari padanho rekushandura kudyidzana kwevashandisi:
Holographs - Microsoft iri kutotumira Hololens uye ndakavhura nzvimbo dzekuvandudza. Elon Musk aratidzira zvimwe mienzaniso ye holographic interfaces naizvo.
Organic Chiedza-Chinoburitsa Diode (OLED) - Isu parizvino tine zvakapfava uye zvine mutsindo zvakapetwa, asi zvakaomarara, mafafitera pamahwendefa, malaptop uye skrini. Nekudaro, OLED tekinoroji inogona kushandiswa pane inoshanduka maficha. Fungidzira ramangwana apo iwe smartphone ine simba senge chero komputa yedesktop, uye iwe unogona kugara pasi kuchitoro chekofi uye unroll ndokuzarura yako 30 inch screen. Kana pamwe yakavakirwa zvakananga mune yako zvipfeko!
Brain Wave Kubatana - Kwemakore, kutsvagisa kwekurapa kwave kuri kugadzirisa-kugadzirisa kusangana pamwe neyedu system yetsinga. Iyo nyowani nyowani tekinoroji, inogoneswa neine simba inotakurika komputa tekinoroji, inopindura nekumhanya kwakakodzera kune pfungwa kune mechiniki kudyidzana. Zvishandiso zvitsva, senge Emotion, shandisa electroencephalography (EEG) kuona kuti unopinda mumafungu chaiwo europi kuti ubatanidze nekunze kwekushandisa.
Iyo yega mushandisi interface kana kudyidzana kwandinotenda iyo infographic inosuwa iri kucherechedzwa kwenzwi. Ipo ichive chiri kutonyanya kuitika kare, ramangwana remirairo yezwi richava rakanyanya kureba munguva pfupi iri kutevera.
Uye nanhasi, yedu Amazon Echo yakanyatsoitika pakuziva mirairo yezwi uye kupindura nenzira kwayo. Mune mawonero angu, zviri nani kwazvo kupfuura kuzivikanwa kwenzwi senge Apple Siri.
Tags: ubongohuropi wave kuonaemotivholographholographic inowanikwahololenspfungwa yekudzoraOledOrganic Chiedza-Chinoburitsa DiodeTouch screentouchscreenskudyidzana kwevashandisimushandisi nzvimbo
Maitiro Evamiriri VeMutungamiri Vari Kushandisa Email Kushambadzira